Ungayithola kanjani i-backlink esemqoka kuwebhusayithi yakho ngamasu asebenzayo?
Bonke abanikazi bewebhu abangathanda ukuthuthukisa izikhundla zabo bafuna izindlela zokuthola i-backlink kumawebhusayithi abo. Izixhumanisi ezingenayo ziyizinto ezibalulekile zokubeka isayithi lakho kuwebhusayithi namavoti wegunya lakho lomkhiqizo. Ukwakhiwa kwesixhumanisi kuyindlela yokwakha izixhumanisi ezintsha ezingenayo kwezinye izingosi ezihlobene niche ngenhloso yokuphakamisa igunya lomkhiqizo nokuheha ithrafikhi emthonjeni oxhunyiwe. Inqubo yokwakha isixhumanisi ibhekisela ekusebenziseni kwe-off-page futhi kufanele yenziwe ngemuva kokuhlelwa kwe-website nokuthuthukiswa kokusebenza, ikhwalithi yokuqukethwe kwekhwalithi, nokudala ukuklama komsebenzisi. Uma zonke izinqubo zokusetha kwekhasi ezisekhasini zenziwa, yisikhathi sokubonisa isayithi lakho kuzilaleli ezibanzi. Ukwakhiwa kwesixhumanisi kufana kakhulu nezwi lomlomo, okuhambisana necebo elingenayo lokuthengisa.
Ukudala zonke izixhumanisi zangemuva akunakwenzeka. Ngokulinganayo, yingakho udinga ukwazi ezinye izici ze-backlink ezijwayelekile ezibandakanya:
Izixhumanisi ezifakiwe zinamandla uma zivela emithonjeni yewebhu ehlobene nembonini.
Umbhalo wakho we-anchor kufanele ubukeke wemvelo futhi uhlotshaniswe nesihloko sokuqukethwe kanye negama lakho elingukhiye elihlosiwe.
Umbhalo oseduze ne-backlink yakho kufanele ube ngokufanelekile futhi owusizo. Abasebenzisi akufanele bakwehlele njengokukhangisa.
Inombolo yezixhumanisi ezingenayo ngaphakathi kwekhasi elixhumanisa neyakho.
Isiphathimandla sekhasi lokuxhumanisa nedumela.
Iwebhusayithi yokuxhumanisa i-PageRank.
Ngaphezu kwalokho, kudingeka ukhumbule lezi zinto ezilandelayo ngenkathi ukwakha izixhumanisi kusayithi lakho:
Ama-Backlink akho kufanele akhiwe ezindaweni ezihlukahlukene ukubonisa i-Google ukuthi okuqukethwe kwakho kuyakwazisa inani labantu abahlukene. Ngaphezu kwalokho, ngokudala izixhumanisi ezizindeni ezihlukahlukene, uthuthukisa iphrofayili yakho yokuxhumanisa futhi ukwenze kube ngaphezulu kokuphilayo.
Ukulinganisa phakathi kwama-dofollow nezixhumanisi ezingezansi
Yiqiniso, inhloso eyinhloko yokwakha isixhumanisi yabaningi be-webmaster ukuthola ukulandelwa kwe-backlinks ngoba badlulisela ukuxuba ijusi emithonjeni exhunyiwe. Noma kunjalo, ukwakha iphrofayli ye-backlink ebonakalayo enempilo nangokwemvelo, udinga ukukhiqiza kokubili ukulandela futhi ungahambisani nezixhumanisi zangaphandle.
Udinga ukwakha imibhalo efana ne-anchor ehlukene. Ngaphezu kwalokho, imibhalo yakho ye-anchor ayifanele ibuke njengegama lakho lomkhiqizo noma igama elingukhiye elihlosiwe. Khumbula ukuthi imibhalo efanayo ye-anchor izolimaza kakhulu idumela lakho futhi ibangele izijeziso zeGoogle.
Ngaphambi kokubuyekezwa okukhulu kwe-Google ngo-2012, bonke abakwa-webmasters benza iphutha ngenani lezixhumanisi ezingenayo esikhundleni sekhwalithi yabo. Kodwa-ke, uma isibuyekezo se-Google Penguin siqala ukudlala, wonke amasu wokudala ama-black-hat we-SEO yokwakha ayizange aphumelele.
Ngakho-ke, ake sixoxe ukuthi singayithola kanjani i-backlink yewebsite yakho ngendlela ephilayo:
Wena angathola izixhumanisi zokuhlela ngokuxhumana nje nama-PR ahlobene nezindawo eziphakeme ze-PR futhi uxoxe nabo ngamathemba akho wokwakha izixhumanisi. Kodwa-ke, udinga ukulungele ukuthi ungafinyelela kubanikazi bewebhusayithi abaningi futhi ngenxa yalokho unganakiwe noma uthole impendulo engalungile. Ungahlola igunya lezindawo ezihlobene niche esebenzisa i-Semalt Web Analyzer noma i-Majestic Source .